Taunggyi Time (တောင်ကြီးတိုင်းမ်): January 2014
ပအိုဝ်းကျောင်းသား/သူများ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲနှင့် ကျောင်းသားဟောင်းနှုတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ
ခွန်ရာဇာ (တောင်ကြီး) | ဇန်န၀ါရီလ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီးနည်းပညာတက္ကသိုလ် ပအိုဝ်းကျောင်းသား/သူများ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲနှင့် ကျောင်း သားဟောင်းနှုတ်ဆက်ပွဲကို အနာဂတ်ပအိုဝ်းကျောင်းသားလူငယ်များ ပညာရေးမြင့်တင်ခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံးညီညွှတ်ခြင်းကို ရည်ရွယ်၍ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်၊ တောင်ကြီးမြို့ အေးသာယာနည်းပညာတက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တပ်မတော်နှင့်ပြည်သူကြား ရန်တိုက်ပေးဒါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
ဆောင်းပါး | ခွန်သန်းအောင် (တောင်ကြီး) | ဇန်န၀ါရီလ ၂၈ ရက်၊ တောင်ကြီးတိုင်းမ်
လှပသည့်တောင်ပေါ်မြို့ဆိုပြီး တောင်းကြီးမြို့သည် အေးချမ်းသော တောင်ပေါ်မြေ အနောက်တောင် လေညှင်းပြေပြေရှု့သည့် ရှမ်းပြည်၏ ရှု့ခင်းမြို့တော်ဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်တန်းနှင့် အနောက်တောင်တန်း နှစ်သွယ်ကြားမှ လှပစွာနဲနှင့် ရှင်သန်လာခဲ့သည့် မြန်မာ့နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် သဘာဝအင်းလေးကန်လည်း တည်ရှိနေသည်။ အခြား ပင်းတယလှိုင်ဂူ၊ ထန်စန်းဂူနှင့် ကက္ကူဘုရား စေတီများသည်လည်း ပြည်တွင်းပြည်ပ ရွေဧည့်သည် မိတ်ဆွေတော်များအား အလည်ပျော်ရန် စွဲဆောင်နိုင်သော သဘာဝရှု့ခင်းအပြည့် ဆောင်ကျဉ်းပေးသည့် နေရာများဖြစ်သည်။
ဘန်ကောက်ရောက်ပအိုဝ်းမိသားများမှ ပအိုဝ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (ဟိုပုံးမြို့) အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး)၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခု |တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် (၉) ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပွဲ၌ ပအိုဝ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ The Most Informative ဆု ရရှိ
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး)၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ဘုန်းကြီးကျောင်းအသစ် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းမရှိ၍ ဆရာတော်အခက်တွေ့
ခွန်ရာဇာ (တောင်ကြီး) | ဇန်န၀ါရီလ ၂၁၊ ၂၀၁၄ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
လိန်းလီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဆရာတော်နှင့် တကာများ တောင်းဆိုမှုကို လိုက်လျောပေးမည်ဟု နုတ်ကတိပေးပြီး ယခုနောက်တစ်မျိုး လိမ်လည်မှု ပြုလုပ်သောကြောင့် ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း အကြွေးတင်နေသော ဆရာတော်သည် ကျေနပ်မှု မရှိ၍ ပြောင်းရွှေမှု မလုပ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အထက်ပေါင်းလောင်းကျေးရွာများ ဒုက္ခကြုံရခြင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
HIV ဝေဒနာရှင်ကိုယ်တိုင် HIV AIDS ပညာပေးဆွေးနွေးဝိုင်းကို တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပ
ခွန်ထီးခမ်း | ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၄ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
Constitutional Change and the Future for Burma
By Kanbawza Win | January 11, 2014 | Taunggyitime
I dread at the thought of future and sometimes my fickle mind would haveanightmare of thatasecond Galon U Saw has appeared. (ဒုတိယဂဠုန်ဦးစော ပေါ်လာတော့မည်လား။) In Burma the word “Galon U Saw” is somewhat similar to Judas Iscariot, for he is the one that orchestrated the killing of Aung San and his cabinet ministers just before the Union of Burma, came into being in 1948. So also now with the impending change of the 2008 Nargis Constitution will someone takeapot shot at Daw Aung San Suu Kyi?
ခွန်ရာဇာ (တောင်ကြီး) | ဇန်န၀ါရီ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၄ | တောင်ကြီးတိုင်းမ် | ဆောင်းပါး
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်နေသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများသည် လူမျိုးကိုယ်စီဍ် စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများရှိကြပါသည်။ တိုင်းရင်းသားပေါင်း တစ်ရာ (၁၀၀) ကျော်ရှိသည့်အနက် ပအိုဝ်းလူမျိုးများသည် သမိုင်းစဉ်ဆက် ကိုယ်ပိုင်စာပေ၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများ ရှိခဲ့သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးငယ် ဖြစ်ပါသည်။
၆၄ နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိန်းအမှတ် ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် အားကစားပွဲကျင်းပ
ခွန်ရာဇာ တောင်ကြီး | ဇန်န၀ါရီလ5ရက်၊ 2014 ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
အမြင်ဆောင်းပါး | ခိုင်လင်း(မေဃ၀တီ) | ဇန်န၀ါရီ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
၁၇၈၄ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘလာ(၃၁) ရက်ဟာ ရခိုင့်အချုပ်အခြာအာဏာ ကျဆုံးတဲ့နေ့လို့ အစဉ်အလာအားဖြင့် မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ကျနှော်လေ့လာဖူးတဲ့ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ယူ ကျမ်းနှစ်စောင်မှာတော့ ၁၇၈၅ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ (၂) ရက်နေ့လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ပအိုဝ်းတွေ ဘယ်ရောက်နေလဲ? ဘာတွေ လုပ်နေလဲ? အမှတ် (၂)
အမြင်ဆောင်းပါး | ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
အမျိုးသားညီလာခံ ခေါ်ဆိုရန် လိုအပ်ခြင်းအကြောင်းရင်း။
ယ္ခင်စာရေးသူ စါင်ဖါအောင် နှင့် ဗွေးစါင်ပေ ပြုစုရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးအမှတ် (၁) တွင် အခြားလူမျိုးစု အသီးသီးက အမျိုးသားညီလာခံများ ခေါ်ယူပြီးစီးခဲ့ကြသော်လည်း ပအိုဝ်းတို့မှာ မသေချာ မရေရာ ဖြစ်နေခြင်းကို အားမလို အားမရဖြစ်မိ၍ ရေးသားဖေါ်ပြရခြင်းဖြစ်ပေသည်။
တပ်မတော်နှင့်ပြည်သူကြား ရန်တိုက်ပေးဒါ ဖွဲ့စည်းပုံ...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် (၉) ကြိမ်မြောက် နိုင်...
ဘုန်းကြီးကျောင်းအသစ် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းမရှိ၍ ဆရာတော...
အထက်ပေါင်းလောင်းကျေးရွာများ ဒုက္ခကြုံရခြင်း သတင်းစာ...
HIV ဝေဒနာရှင်ကိုယ်တိုင် HIV AIDS ပညာပေးဆွေးနွေးဝို...
၆၄ နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိန်းအမှတ် ဆီဆိုင်မြို့...
ပအိုဝ်းတွေ ဘယ်ရောက်နေလဲ? ဘာတွေ လုပ်နေလဲ? အမှတ် (၂)...